အိုင်ပက် (iPad) အသုံးပြုနည်း (အပိုင်း-၁) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home iDevice အသုံးပြုနည်း နည်းလမ်းများ အိုင်ပက် (iPad) အသုံးပြုနည်း (အပိုင်း-၁)
Maung Pauk at 6:01:00 PM iDevice အသုံးပြုနည်း, နည်းလမ်းများ,
အခုတစ်ခါ အိုင်ပက် (iPad) အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အိုင်ပက် (iPad) အသုံးပြုပုံကို ဖော်ပြချင်တာ ကြာလှပါပြီ။ သို့သော် စိတ်ကူးရုံ သက်သက်လေး။ စိတ်ကူးကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေး။ မဖော်နိုင်တဲ့ အကြောင်းကလည်း အများကြီးလေ။ အိုင်ပက် (iPad) ကို သုံးတဲ့လူ နည်းနေတာကြောင့်ရယ်။ သုံးနေကြတဲ့ အနည်းငယ်သော သူတွေကလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ လမ်းညွှန်းကို ဖတ်ပြီး သုံးနိုင်ကြတာရယ်ကြောင့်ပါ။
အဲလို ခပ်ဆိတ်မ နေလာခဲ့တာ…။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကမှ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက နယူးအိုင်ပက် (The New iPad) ကို ၀ယ်သုံးတယ်။ သင်ပုန်း (Tablet) တစ်မျိုးမျိုးကို ၀ယ်သုံးဖို့ သူ စိတ်ကူးနေတာ ကြာလှပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘာဝယ်ရမှန်း မသိဘူး။ အိုင်ပက်က ကောင်းနိုးနိုး၊ ဆမ်ဆောင်းကပဲ ဟိုလိုလိုနဲ့ပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ အိုင်ပက် ကောင်းတယ်လို့ ဘယ်သူကများ ညွှန်းသလဲတော့ မသိပါ။ စာရေးသူရဲ့ ဘလော့ထဲက အိုင်ပက်အကြောင်းကို သူ ဖတ်ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မှာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၀ယ်လိုက်ပါပြီ။ မျောက် အုန်းသီး ရသလို ဟိုပြေးဒီလွှား နေရသလားတော့ မပြောတတ်ပါ။ အိုင်ပက် ရရချင်း စာရေးသူဆီ လှမ်းဆက်သွယ်လာတယ်။ အိုင်ပက်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးလိုက်တာများ တပုံတစ်ခါကြီး။ စာရေးသူကလည်း တတ်သမျှ မှတ်မိသလောက် ဖောက်သည်ချပေးပါတယ်။
အဲ…အဲမိတ်ဆွေက အင်္ဂလိပ်စာကို တီးမိခေါက်မိရုံလေးပါ။ သူ့လိုပဲ အင်္ဂလိပ်စာ သိပ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ အိုင်ပက်သုံးသမား မြန်မာပြည်မှာ အများကြီး ရှိတယ်တဲ့။ သူ သိတဲ့ အိုင်ပက်သုံး လူတွေလည်း တပုံကြီး၊ ဆယ်ဂဏန်းချီ ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ လမ်းညွှန်းကို မဖတ်တတ် ဖတ်တတ်နဲ့ လမ်းညွှန်းချက်အတိုင်း လိုက်လုပ်တာ တလွဲချည်းပဲတဲ့။ အမြဲတန်းလိုလို အိုင်ပက် အရောင်းဆိုင်တွေနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရသတဲ့။ စာရေးသူကိုလည်း အွန်လိုင်းမှာ ဆုံဖြစ်မှ မေးရမြန်းရတယ်ဆိုတော့ မဆုံဖြစ်တဲ့အခါ အဆင်မပြေဘူး။ ဒါကြောင့် အိုင်ပက် သုံးပုံ သုံးနည်း မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေ ရှိရင် ညွှန်းစမ်းပါဦး၊ စာရေးသူကိုလည်း သူ့ကို ရှင်းပြသလို အခြားသူတွေကို ထပ်ရှင်းစရာ မလိုအောင် အိုင်ပက်အကြောင်း ရေးတင်ပါဦးလို့ တောင်းဆိုတယ်။ ဒီလို အကြောင်းလေးတွေကြောင့် ကောက်ကာငင်ကာ အိုင်ပက် အသုံးပြုနည်းကို တင်လိုက်ပါတယ်။
အိုင်ပက် အသုံးပြုနည်း (အပိုင်း-၁) မှာ အိုင်ပက်ရဲ့ မူလမျက်နှာ (စကရင်း) ထိပ်ဆုံးပိုင်း ဘားတန်း တစ်လျှောက်မှာ ရှိနေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် (Functions) များကိုပဲ ဦးစွာ တင်ပြပါမယ်။ နောက်ကျမှ အခွင့်သင့် အခါသင့် အပိုင်း-၂၊ အပိုင်း-၃ တို့ကို ဆက်လက်ပြီး ဖော်ပြပါမယ်။
(အမှာ= အိုင်ပက်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားတင်ပြထားပေမယ့် အိုင်ဖုန်း (iPhone) အိုင်ပေါ့တ် တပ်ဂ်ျ (iPod Toch) တို့မှာလည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း အကြောင်းရင်းက iPad, iPhone, iPod Touch သုံးခုလုံးဟာ စက်လည်ပတ်မှုစနစ် တစ်မျိုးထဲ တစ်ပုံစံထဲကြောင့်ပါ။)
အိုင်ပက်ရဲ့ မူလမျက်နှာလို့ခေါ်တဲ့ ဟုမ်း-စကရင်းပေါ်က အခေါ်အဝေါ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ
1. Home (ဟုမ်း-ခလုတ်)
Home (ဟုမ်း-ခလုတ်) ကို မူလစာမျက်နှာလို့ ပြောရင် ပိုသင့်တော်မယ် ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဘယ်မျက်နှာကိုပဲ ဖွင့်ထားဖွင့်ထား ပြန်ဖျောက်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြန်ပိတ်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ Home (ဟုမ်း-ခလုတ်) ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအခါကျရင် မူလစာမျက်နှာကိုပဲ ပြန်ရောက်သွားမှာမို့လို့ပါ။
Home (ဟုမ်း-ခလုတ်) ကို သွားပြီးနှိပ်စရာ မလိုဘဲနဲ့ မူလမျက်နှာကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့ နည်းလမ်းကလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒါက- လက်ရှိ ဖွင့်ထားတဲ့ မျက်နှာ (Tab) ပေါ်ကို လက်ငါးချောင်းလုံးကို စကရင်းပေါ် ဖြန့်တင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် လက်ငါးချောင်းလုံးကို အတွင်းဘက်သို့ ဆွဲစိ (ဆွဲစု) လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် လက်ရှိ ဖွင့်ထားတဲ့ မျက်နှာ (Tab) က ပျောက်သွားပြီး မူလမျက်နှာ အဖွင့်-စကရင်းသို့ ပြန်ရောက်သွားမယ်။ ဒီနည်းက Home (ဟုမ်း-ခလုတ်) ကို ချွေတာတဲ့ သုံးနည်းလည်း ခေါ်တယ်။ Home (ဟုမ်း-ခလုတ်) ကို အမြဲတန်း နှိပ်နေရင် ခလုတ် ပျက်သွားမှာကို ကြောက်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီနောက်နည်းကို သုံးပါ။
2. Airplane mode (လေယာဉ်-စနစ်)
Airplane mode (လေယာဉ်-စနစ်) ဆိုတာ လေယာဉ်ပျံ ပုံစံဖော်ထားတဲ့ စကရင်းအတွင်းက အွန်/အော့ပ် (On/ Off) ခလုတ်ပါ။ ဒီခလုတ်ကို အွန်-ထားရင် (ဖွင့်ထားရင်) ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်းတို့၊ ဘလူးတု(တ်) စနစ်တို့ အလုပ် မလုပ်တော့ပါ။ ၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကွန်ယက်အားလုံးကို ပြတ်တောက်လိုက်တာပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ တို့တစ်တွေ သုံးနေကျ Stand by, Sleep စနစ်တို့နဲ့ ချွတ်စွတ်ပဲ။
လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားရတဲ့အခါ လေယာဉ်ပေါ် ဖုန်း/သင်ပုန်းတွေကို အသုံးပြုခွင့် မပေးပါ။ ထိုအခါ ဖုန်း/သင်ပုန်းကို ပါဝါ-ပိတ်နေရရင် ကြန့်ကြာတတ်တယ်။ လေယာဉ်ပေါ်က အဆင်း ဖုန်း/သင်ပုန်းကို ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း ပြန်ပွင့်လာဖို့ စောင့်ရတာလည်း နည်းနည်းတော့ ကြာတယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြေည့်လည်း ပါဝါကို ဖွင့် / ပိတ် လုပ်နေရမယ့်အစား Airplane mode (လေယာဉ်-စနစ်) ကိုသာ ရွေးနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပါဝါအဖွင့် / အပိတ်အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာတယ်။
ကားနဲ့ ခရီးဝေး သွားရမယ့် အချိန်မှာလည်း Airplane mode (လေယာဉ်-စနစ်) ကို အွန်-ထားရင် ဘက္ထရီ အားကုန် သက်သာတယ်။ ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်က တာဝါတိုင်တွေရဲ့ ဆွဲအားနဲ့ အိုင်ပက်ထဲက ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တို့က အော်တိုမတစ် ချိတ်ဆက်နေကြတယ်။ ဒီ Airplane mode နဲ့သာ ပိတ်မထားရင် ဘက္ထရီအား ဆွဲစားသွားမယ်။ ဘက္ထရီအား ချွေတာလိုတဲ့အခါ ဒီမုဒ်ကိုသာ ဖွင့် (On) လိုက်ပါ။
အိုင်ပက်ရဲ့ နောက်ကျောနဲ့ ဘေးနှစ်ဘက်ရှိ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ
Airplane mode (လေယာဉ်-စနစ်) ကို အွန်-ထားရင် အောက်ပါ အချက်အလက်များ အသုံးပြုလို့ မရပါ-
၁။ အီးမေးလ် ပေးပို့ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း။
၂။ အင်တာနက် ဘရောက်ဆာကို ဖွင့်ခြင်း။
၃။ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ် အကောင့်၊ ပြက္ကဒိန်တွေကို စင်းခရိုနိုက် (သိမ်းဆည်း) ခြင်း။
၄။ ယူတျုစ် (Youtube) ကနေ ဗီဒီယို တင်ခြင်း၊ ဖွင့်ကြည့်ခြင်း။
၅။ ရာသီဥတု သတင်းအချက်အလက်။
၇။ အပ်ပ်စတိုး (Apps Store) ကို ဖွင့်ခြင်း။
၈။ အင်တာနက်ကနေ ပေးထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ဆော့ကစားခြင်း-တို့ ဖြစ်တယ်။
3. 3G/4G (သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီစနစ်)
အိုင်ပက်ရဲ့ စကရင်း ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှာ ပြသပေးနေတဲ့ 3G/4G (သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီ) သင်္ကေတဟာ တို့တစ်တွေ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းဆင်းကဒ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုစနစ်ကို ပြသပေးတယ်။ ၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) သက်သက် သရီး-ဂျီ (3G) ဖိုး-ဂျီစနစ် (4G) မပါတဲ့ အိုင်ပက်မှာတော့ ဒီစနစ် ပါဝင်မှာ မဟုတ်ပါ။
ထပ်ရှင်းရရင်- အိုင်ပက် (iPad) တိုင်းမှာ အမျိုးအစား ၂-မျိုး ကွဲပြားတယ်။
၁။ ၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) သက်သက်ရယ်၊
၂။ ၀ိုင်ဖိုင်+သရီး-ဂျီ (အိုင်ပက်တူး အတွက်) ၀ိုင်ဖိုင်+ဖိုး-ဂျီ (အိုင်ပက်-သရီး အတွက်) ဆိုပြီး ခွဲထားတယ်။
အဲဒီ ၂-မျိုးကိုသာ သိုလှောင်နိုင်တဲ့ ပမာဏ ၁၆-ဂျီဘီ၊ ၃၂-ဂျီဘီနှင့် ၆၄-ဂျီဘီ ဆိုပြီး ၃-မျိုးစီ ပြန်ကွာဟသွားတယ်။ (အိုင်ပက် အမျိုးအစားပေါင်း ၆-မျိုး ကွဲသွားတာပေါ့)
အခုဖော်ပြတဲ့ 3G/4G (သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီစနစ်) ကိုတော့ ဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ WiFi+3G (4G) အိုင်ပက် အမျိုးအစားကိုသာ ရည်ရွယ်တာပါ။ ပထမအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) သက်သက် အိုင်ပက်နဲ့ မဆိုင်ပါ။
အိုင်ပက်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ဘားတန်းပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်များ
၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) သက်သက် ပါတဲ့ အိုင်ပက်ကို ၀ိုင်ဖိုင် မိတဲ့နေရာလောက်သာ အသုံးပြုလို့ ရတယ်။ ၀ိုင်ဖိုင် လွင့်ထားတဲ့ နေရာ (ဥပမာ-အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ ပလာဇာ၊ လေဆိပ်) လောက်မှာသာ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်တယ်။ (ဒါတောင် အခမဲ့ ပေးထားဦးမှ။ အများစုက ပတ်စဝေါ့ (Password) နဲ့ ၀င်သုံးရတဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်သာ များတယ်။) ဒါပေမယ့် ၀ိုင်ဖိုင်+သရီး-ဂျီ (ဒါမှမဟုတ်) ၀ိုင်ဖိုင်+ဖိုး-ဂျီ အိုင်ပက်ဟာ ၀ိုင်ဖိုင် မိတဲ့ နေရာတိုင်း အသုံးပြု ရရုံသာမက ဆင်းကဒ် (SIM) သီးသန့် ပါတဲ့အတွက် ဆင်းကဒ်ကနေတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အင်တာနက် ကွန်ယက်တွေ အားလုံး အသုံးပြုလို့ ရတယ်။ ဆိုလိုတာက ဖုန်းလိုင်း ၀င်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ ဖုန်းလိုင်းကနေတစ်ဆင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုလို့ ရတယ်။ အဲလို ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ ဆင်းကဒ်ကုမ္ပဏီကနေတစ်ဆင့် မိမိယူထားတဲ့ သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီရဲ့ ပက်ကေ့ (Package) အလိုက် အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
ဒီသရီး-ဂျီစနစ်ကိုတော့ မြန်မာပြည်ကလွဲရင် နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုက ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ သို့သော် ဖိုး-ဂျီစနစ်ကိုတော့ စက်မှုထွန်းကားတဲ့ အရှေ့အာရှ၊ ဥရောပနဲ့ အမေရိကလောက်သာ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေသေးတယ်။ (ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာက နယူးအိုင်ပက်လို့ ခေါ်တဲ့ အိုင်ပက်-သရီး (The New iPad) ကို ၀ယ်သုံးတဲ့အခါမှာ နံပါတ် ၂ အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်+ဖိုး-ဂျီ ၀ယ်ထားပေမယ့် မိမိနိုင်ငံမှာ သုံးလို့ မရသေးရင် ဒီဖိုး-ဂျီအတွက် ငွေပိုကုန်တာပဲ အဖတ်တင်မယ်။ တိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာတောင် ဖိုး-ဂျီ အသုံးပြုလို့ မရဘူး ဆိုပြီး အိုင်ပက်-သရီး အများကြီးကို အပ်ပယ်လ်ကုမ္ပဏီဆီ ပြန်အမ်းလိုက်သေးတယ်လေ။)
4. EDGE (အက်ဂ်ျ)
စကရင်း ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှာ ပြသပေးနေတဲ့ 3G/4G (သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီ) စနစ်ရဲ့ နေရာမှာပဲ ဒီ EDGE (အက်ဂ်ျ) စနစ်ကို ဖော်ပြပေးတယ်။ ၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) + သရီး-ဂျီ (3G) / ဖိုး-ဂျီစနစ် (4G) ပါတဲ့ အိုင်ပက်မှာသာ ဒီစနစ်ကို သုံးနိုင်မှာပါ။ အင်တာနက်ရဲ့ ကွန်ယက်စနစ် ဖြန့်ကျက်တဲ့ နိုင်ငံပေါ်မှာ မူတည်ပြီး 3G/4G (သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီ) စနစ်နဲ့ EDGE (အက်ဂ်ျ) စနစ် ကွာခြားသွားတာပါ။ ခုလောလောဆယ်ဆယ် မြန်မာပြည်က ဒီ EDGE (အက်ဂ်ျ) စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတယ်။ သရီးဂျီ/ ဖိုးဂျီ မရသေးတဲ့အတွက် EDGE (အက်ဂ်ျ) စနစ်ကို သုံးရတယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်။ အင်တာနက်ကို သုံးစွဲတဲ့အခါမှာ 3G/4G (သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီ) စနစ်က EDGE (အက်ဂ်ျ) စနစ်ထက် အများကြီး သာတယ်။ မြန်နှုန်း မြင့်တယ်။ အိန္ဒိယမှာတောင် တစ်ချို့ပြည်နယ်တွေက 3G/4G (သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီ) စနစ် မရသေးပဲ၊ EDGE (အက်ဂ်ျ) စနစ်နဲ့သာ စခန်းသွားနေရတယ်။ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးထွက်တဲ့အခါ ပိုသိသာတယ်။ နယူးဒေလီ၊ မွန်ဘိုင်းတို့က 3G ရနေပေမယ့် ဗိဟာရ်၊ ယူပီ-ပြည်နယ်တွေမှာ EDGE သာ လိုင်းဝင်တယ်။ သုံးနေတဲ့ အိုင်ပက်မှာ ဒီ EDGE (အက်ဂ်ျ) စနစ် ၀င်လာရင် အပေါ်ပိုင်း ဘားတန်းပေါ်မှာ E အတိုကောက် စာလုံးနဲ့ ပေါ်နေတတ်တယ်။ ဖုန်းလိုင်းကို ပြသပေးတဲ့ လိုင်းတန်းရဲ့ ဘေးနားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘက္ထရီ သက်တမ်းကို ဖော်ပြပေးတဲ့ လိုင်းတန်းနားမှာ ဖြစ်ဖြစ် E စာလုံး ပေါ်နေရင် EDGE (အက်ဂ်ျ) ကွန်နက်ရှင်းလို့သာ မှတ်ထားလိုက်ပါ။
5. GPRS (ကွန်ယက်)
GPRS ဆိုတာလည်း ချိတ်ဆက်မှု ကွန်ယက်တစ်ခုပါပဲ။ GPRS ရဲ့ အရှည်စာလုံးကိုတော့ General Packet Radio Service ဖြစ်ပြီး ၀-လုံးပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ စကရင်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာ ပေါ်နေတတ်တယ်။ 3-G စနစ်မပေါ်ခင်က သုံးစွဲခဲ့တဲ့ 2.5-G စနစ် တစ်ခုပါ။ GSM စနစ်သုံး ဖုန်းကွန်ယက်ကနေတစ်ဆင့် သတင်းအချက်အလက်တွေ လက်ခံ / ပေးပို့တဲ့ စနစ်ဆိုလည်း ပြောလို့ရတယ်။ EDGE (အက်ဂ်ျ) လိုပဲ ၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) + သရီး-ဂျီ (3G) / ဖိုး-ဂျီစနစ် (4G) ပါတဲ့ အိုင်ပက်မှာသာ ဒီစနစ်ကို သုံးနိုင်မှာပါ။
6. Wi-Fi (၀ိုင်ဖိုင်)
Wi-Fi (၀ိုင်ဖိုင်) ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဘယ်အိုင်ပက် အမျိုးအစားမှာမဆို မပါမဖြစ် ပါဝင်ရတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ဖို့ရာ သုံးရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုပါပဲ။ ကွန်ပျူတာ အများစုမှာ ကြိုးသုံးပြီး အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ရပေမယ့် သင်ပုန်း (Tablet) တိုင်းမှာတော့ ကြိုးမလိုပဲ ကြိုးမဲ့နဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မြဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ၀ိုင်ယာလက် (ကြိုးမဲ့) ဆက်သွယ်မှုလို့ ခေါ်တယ်။ မိမိတို့ရဲ့ အိမ်၊ ရုံခန်းမှာ ဒါမှမဟုတ် အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဈေးဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ လေဆိပ်တွေမှာ ၀ါယာလက် ကွန်နက်ရှင်း လွင့်ထားရင် ဒီဝိုင်ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး အင်တာနက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ ပေးထားတဲ့ နေရာတိုင်းမှာတော့ ၀ိုင်ဖိုင်ကို ဖွင့်ရုံလေး အင်တာနက် တန်းဝင်လာမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ကန့်သတ်ထားရင်တော့ ပတ်စဝေါ့ (Password) နဲ့ ၀င်ရတယ်။ ၀ိုင်ဖိုင်ကို တခြမ်းပဲ့ လိုင်း ၄-ထပ် သင်္ကေတနဲ့ ပြသပေးလေ့ ရှိတယ်။ လိုင်းများလေ ကွန်နက်ရှင်း ပိုမိလေလေပဲ။
Wi-Fi (၀ိုင်ဖိုင်) ကို သုံးနိုင်အောင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ-
မူလမျက်နှာ (Home Screen) မှာ ရှိနေတဲ့ Setting (ခွေးသွားစိတ်နဲ့ ရုပ်ပုံ) ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်မျက်နှာတစ်ခု ထပ်ပွင့်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Setting နဲ့ General ဆိုပြီး ကော်လံ ၂-ခု ဖြစ်နေမယ်။ ဘယ်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကော်လံထဲက Wi-Fi (တခြမ်းထဲ လိုင်း၎-ထပ်ရုပ်ပုံ) ကို ထပ်နှိပ်။ ပြီးရင် Wi-Fi ကို Onလိုက်ပါ။ အောက်မှာ ရှိတဲ့ Choos A Network ကို နှိပ်ပါ။
တကယ်လို့များ ဖရီးပေးထားတဲ့ Wi-Fi (၀ိုင်ဖိုင်) ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ပေါ်လာတဲ့ Network အမည်ထဲက တစ်ခုခုကို ကောက်ရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်း ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Network ဆိုရင် Password (ပစ်စဝေါ့) ကို ထပ်ရိုက်ထည့်ရဦးမှာပါ။
၀ိုင်ဖိုင် အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့်
7. Activity (လုပ်ဆောင်ချက်)
Activity (လုပ်ဆောင်ချက်) ဆိုတာ တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်ဆောင်နေဆဲ (လုပ်နေတုန်း) ကို ဆိုလိုတာပါ။ အင်တာနက် ကွန်ရက် ၀င်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် သာဒ်ပါတီလို့ခေါ်တဲ့ အသုံးချဆော့ပ်ဝဲလ် (Apps) တစ်ခုခုကို ဒေါင်းလုတ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီသင်္ကေတကို ပြလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆို ၀က်ဘရောက်ဆာ (အင်တာနက် စာမျက်နှာ) တစ်ခုခုကို ဖွင့်ရင်တောင် ဒီ Activity (လုပ်ဆောင်ချက်) က လည်ပြီးမှ ပွင့်လာတတ်တယ်။ သဘောက အင်တာနက် နှေးလေ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်က များလေပဲ။ ဒီသင်္ကေတ လည်နေတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်ဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်ပေးရပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက် ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ပျောက်သွားမယ့် သင်္ကေတပါ။
8. VPN (သီးခြားကွန်ယက်)
Virtual Private Network ရဲ့ စာလုံးကို အတိုကောက်ဖြင့် VPN (သီးခြားကွန်ယက်) လို့ ခေါ်တယ်။ “သီးခြားကွန်ယက် အတု” လို့ ဘာသာပြန်ရလေမလားပဲ။ အများသုံး ကွန်ရက်ကနေ တကိုယ်ရေ တစ်ကာယ သီးခြားကွန်ယက်အဖြစ် ဖန်တီးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ အင်ဖရာနက် (အင်တာနက် မဟုတ်ပါ) အဖြစ် သီးခြား ပံ့ပိုးပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အင်ဖရာနက်အတွင်းမှာ အမျိုးအစားတူ သင်ပုန်း (Tablet) အချင်းချင်း၊ ဖုန်းအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ / လက်ခံရယူနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို VPN (သီးခြားကွန်ယက်) လို့ ခေါ်တယ်။
အကြမ်းဖျဉ်း ပြောရရင် အင်တာနက် မရှိ၊ ပြင်ပ ကွန်နက်ရှင်းကို မသုံးဘဲ အိုင်ပက် ၂-လုံးကြား အချင်းအချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုပဲ ဆိုပါစို့။
9. Lock (သော့)
အိုင်ပက် တစ်လုံးကို စတင်ပြီး အသုံးပြုတဲ့အခါတိုင်း ဒီ Lock (သော့) ကို အမြဲတန်း ဖွင့်ပေးရတယ်။ အသုံးပြုနေဆဲ ဖြစ်တာတောင် ခဏရပ်ထားရင် ပြန်ပြီး ဖွင့်ရပါတယ်။ ၂-မိနစ်အတွင်း အိုင်ပက်ကို အသုံးမပြုရင် အဲဒီ Lock (သော့) က အော်တို အလိုလို ကျသွားပြီး အိုင်ပက် ပိတ်သွားလိမ့်မယ်။ ပြန်သုံးချင်ရင် ပြန်ဖွင့်ရတယ်။ အဲဒီ Lock (သော့) ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ၅-မိနစ်၊ ၁၀-မိနစ် စသည်ဖြင့် ပြန်ချိန်ယူလို့ ရတယ်။ အိုင်ပက်ကို မတို့မထိတဲ့ အချိန်မှာ အလိုလို ပိတ်သွားတာကို လော့ဂ်ချတယ်လို့ ပြောကြတယ် မဟုတ်လား။ ဘက္ထရီအားကို ချွေတာပေးတဲ့ သဘောပါ။
လော့ဂ် ၄-မျိုးကို တွေ့ရပုံ
Lock (သော့) တွင်- Auto Lock, Passcode Lock, iPad Cover Lock, Lock Rotation ဆိုပြီး ၄-မျိုး ရှိတယ်။ ယင်း Lock တုိ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ-
၁။ Auto Lock
အိုင်ပက်ကို အသုံးမပြုတော့တဲ့ အချိန်မှာ မီးအလိုလို ပိတ်သွားတတ်တယ်။
ပြန်ဖွင့်ချင်ရင် Home ခလုတ်ကို နှိပ်၊ လော့ဂ်ကို စလိုက်ခြစ် ခြစ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဖွင့်ပါ။ (ခေါင်းပါတဲ့ မျှား ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ မျှားပြရာဘက်ကို လက်ညှိုးတင်ပြီး ဆွဲလိုက်ပါ။ အိုင်ပက် ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
၂။ Passcode Lock
အိုင်ပက် လုံခြုံမှုအတွက် သော့ခတ်ရပါတယ်။ မိမိရဲ့ အိုင်ပက်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ သတင်း အချက်အလက်၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံ၊ သီချင်း၊ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို မိမိကလွဲရင် ကျန်သူများ ဖွင့်လို့ မရအောင် သော့ခတ်တာပါ။
Setting (ပင်နီယံ- ခွေးသွားစိတ်လို ရုပ်ပုံ) ကို နှိပ်ပါ။
-ပွင့်လာတဲ့ နောက်တစ်မျက်နှာမှာ ဘယ်ဘက်အခြမ်းက General ကို ထပ်နှိပ်ပါ။
-ညာဘက်အခြမ်း လေးကွက်မြောက် Passcode Lock (Off) ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
-အပေါ်ဆုံးစာသားဖြစ်တဲ့ Turn Passcode On ကို ထပ်နှိပ်ပါ။ (ဇယားကွက်တစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မယ်။)
-ဇယားကွက်ပေါ်မှာ စိတ်ကြိုက် ဂဏန်း ၄-လုံးကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ရပါပြီ။
အဲ…အိုင်ပက် ဖွင့်တိုင်း ဒီဂဏန်း ၄-လုံးကို မှန်အောင် နှိပ်နိုင်မှ ပွင့်လာမယ်။
ပတ်စ်ကုဒ် လုပ်ရမယ့်ပုံစံ (ပုံ-၆)
၃။ iPad Cover Lock
အိုင်ပက် အဖုံးကို ၀ယ်သုံးတဲ့သူအတွက်သာ အသုံးဝင်တာပါ။ အိုင်ပက်ကို အသုံးပြုပြီးတိုင်း အဖုံးကို ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အလိုလို မီးပိတ်သွားတာကို iPad Cover Lock လို့ ခေါ်တယ်။
ဒါကိုလည်း Setting > General > iPad Cover Lock / Unlock > On ကို ရွေးလိုက်ပါ။
၄။ Lock Rotation
Rotation ဆိုတာ အလိုလိုလှည့်ပေးတဲ့စနစ်ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ-ဗီဒီယိုကို အလျားလိုက် ကြည့်နိုင်အောင်၊ စာအုပ်တွေကို ဒေါင်လိုက် ဖတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီး ဒီ Rotation စနစ်ကို ထည့်သွင်းပေးထားတယ်။ ဒီစနစ်ကို မလိုချင်တဲ့အခါ Lock Rotation ကို ရွေးထားရပါမယ်။
လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့- ရုပ်ပုံ၊ စာ၊ ဗီဒီယို-စသည်တို့ ဒေါင်လိုက်၊ အလျားလိုက် ဟိုဘက်ဒီဘက် အလိုလို လှည့်သွားတာကို မလိုချင်တဲ့အခါ -
Setting > General > Lock Rotation > On ကို အရင်လုပ်ထားပါ။
ပြီးမှ အိုင်ပက်ကို ဒေါင်လိုက် ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒေါင်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊ အလျားလိုက် ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အလျားလိုက် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အိုင်ပက်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်း ညာဘက်က Side Switch ဆိုတဲ့ အပေါ်ခလုတ် အသေးလေးကို အောက်ဘက်သို့ ဆွဲချလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် မိမိ ရွေးချယ်ထားတဲ့ (ဒေါင်ဆို ဒေါင်လိုက်၊ အလျားဆို အလျားလိုက်ရဲ့) အနေအထားနဲ့ပဲ ငြိမ်နေလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုစောင်းစောင်း လှည့်လှည့် လိုက်မလည်တော့ပါ။ သူရဲ့ သင်္ကေတက အ၀ိုင်းမျှားရဲ့ အလည်တည့်တည့်မှာ သော့ခတ်ထားတဲ့ ပုံပါ။
10. Play (ဖွင့်ပြ)
iTune, Music အပ်ပ် (ရုပ်ပုံ) ကနေ သီးချင်း တစ်ပုဒ်၊ အသံဖိုင် တစ်ခု၊ အသံပါ-စာအုပ် တစ်အုပ် ဖွင့်ပြနေခြင်းကို ပြသပေးတဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်တယ်။ အသံ တစ်သံ ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း ဒီသင်္ကေတ ဘားတန်း ထိပ်ပေါ်မှာ အမြဲတမ်း ပြသပေးတယ်။ အခြား အပ်ပ်တစ်ခုခုကို ပြန်ဖွင့်ပေမယ့် Stop နဲ့ Pause ကို မနှိပ်မချင်း အသံပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါ။
ဘလူးတု(တ်) ဆိုတာ အိုင်ပက် အချင်းချင်း၊ အမျိုးအစားတူတဲ့ iOS (စက်လည်ပတ်မှုစနစ်) အချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက် စသည်များ ပေးပို့ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဘလူးတု(တ်) ကို ဖွင့်ချင်ရင်-
Setting > General > Bluetoth > On ကို ရွေးလိုက်ပါ။ (အသုံးမလိုတဲ့အချိန်တော့ ပြန် Off ထားပေါ့။)
ပုံမှန်ဆိုရင် အိုင်ပက်ရဲ့ ဘတ္ထရီကို ဓာတ်ခဲပုံစံနဲ့သာ ပြသပေးတယ်။ ဘက္ထရီအား ဘယ်လောက်ရှိတယ် သိနိုင်ဖို့ ဓာတ်ခဲပုံစံထဲက လျှော့ကျသွားတဲ့ အဖြူလိုင်းကိုသာ မှန်းဆရတယ်။ အဖြူနည်း အမည်းကျန်များရင် ဓာတ်ခဲ အားနည်းနေပြီ။ ဓာတ်ခဲကို အနီရောင်နဲ့ ပြရင် ဆက်မသုံးနဲ့တော့။ အားသာ ပြန်သွင်းလိုက်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဘက္ထရီရဲ့အားကို ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဖော်ပြထားရင် အား ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ အတိအကျ သိနိုင်တာပေါ့။ ဘက္ထရီအားကို ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဖော်ပြလိုပါက-
Setting > General > Usage > Battery Percentage ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဘက္ထရီရဲ့အားကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ဓာတ်ခဲရုပ်ပုံနားမှာ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖော်ပြပေးလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် iOS အကြောင်း ရှာဖွေရင်း တွေ့လို့ ကူးလာတာပါ..
မူရင်းဆိုဒ်က အေးချမ်းမွန် ဖြစ်ပါတယ်..
iDevice အသုံးပြုနည်း, နည်းလမ်းများ
iDevice အသုံးပြုနည်း နည်းလမ်းများ